Kacsi Wasmo Sheeko Gaaban - iftineducation.com
Kacsi Wasmo Sheeko Gaaban
aadan21 / June 15, 2016
iftineducation.com – Waxaan kuu hadiyeynaa kumanaan dhoolacadeyn ah haddii aad nolosheyda ka baxeyso.
*Haku fekerin inaan albaabka kuu sii taagnaado intaad ka imaaneyso illeyn adigaa fursadaada iska lumiyee,hana iga sugin inaan aamino jaceyl been abuur ah oo qayaano ku dhisan.
*Kuuma xiisi doono marnaba,waana kaa saaray qalbigeyga iigu filan dhaawac intaad qalbigeyga u geystay.
*Waan kaa saaray qalbigeyga,fekerkeyga iyo dhamaanba maskaxdeyda codkaaga iyo muuqaalka wejigaagana xitaa iguma soo dhici doono in aan soo xusuusto.
*Maxaan kuugu dhibaatoonayaa oo aan mustaqbalkeyga kuugu dayacaa? Maxaan isaga dhaadhiciyaa inaad riyada mustaqbalkeyga iyo nasiibkeyga tahay oo aan nafteyda been ugu sheegaa? Waxaa tahay labo wejiile been badan,kuna qanacsan inuu markuu sii jeesto ilaawo balantii iyo axdigii aan ku wadagalnay inaan aduunka iska weheshano.
Qof walbo ha raaco wadadiisa anigana teyda ii daa adigoon karaamada iska qaadin intaan ka badan, baxdo.com, laga yaabee iney wanaagsan tahay si aan ixtiraam isku heyno.
*Ma jecleyn inaan kuu adeegsado kalmado qalbigaaga dhaawici doono laakin iigama aadan tegin fursad kale. Aadmigu qiimahiisa waxaad ogaan kartaa markaad u baahato adigana hada ayaad dareentay cadaabka uu leeyahay qof keligiis lagu laado caashaq.
sheekooyin galmo ah oo kacsi leh
dhacdooyinka aduunka ugu yaabka badan